Nagu saabsan - XuZhou Xinpaez Qalabka Nadiifinta Biyaha Co., Ltd.
Xinpaez: Khabiir ku takhasusay daaweynta biyaha tan iyo 2010 Shiinaha Xinpaez qalabka sifaynta biyaha Co., Ltd. waa soo saare caan ah oo ku takhasusay cilmi baarista, horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta madaxyada qubeyska, tuubbooyinka qubeyska, miirayaasha biyaha, qaybaha miiraha biyaha, iyo qalabka jikada. Waxaa la aasaasay sanadka 2010 iyadoo la diiwaan galiyay raasamaal dhan 6 milyan yuan (RMB). Marka loo eego hagida qiimaha leh ee Agaasimahayaga, 'Mr. WenLian Qiao ', waxaan ku gaarnay guulo aad u weyn degelkan. Hoggaamintiisa soo jiidashada leh, aqoonta faahfaahsan iyo dhiirrigelinta joogtada ah ayaa noo suurtagelisay inaan nafteenna u dhisno sidii urur la isku halleyn karo oo ka tirsan degelkan.
Hadda waxaan wadnay 10 khad oo wax soo saar ah. Waxaa awood na siiyay koox xirfadlayaal ah oo dadaal badan.
Shirkadeenu waxay leedahay koox madaxbanaan QC (Xakamaynta Tayada), waxay sameyn doonaan kormeer muunad qaadis joogto ah oo aan caadi ahayn si loo hubiyo tayada khadka wax soo saarka, iyadoo laga saarayo walwalka macaamiisha. Khubaradeennu waxay adeegsadaan teknoolojiyada ugu dambeeya ee biyaha lagu keydiyo iyo tiknoolajiyada shaandhada biyaha si ay ugu fiican yihiin tayada biyaha. Waxay isla shaqeeyaan midba midka kale si uu ugu guuleysto himilooyinka urur.
Our iibka iyo adeegga network ku fidaa dalka oo dhan, dalalka ugu weyn ee loo dhoofiyo waa Jarmalka, South Korea, Italy, India, Russia, Australia, Indonesia, iwm Shirkadaha iskaashiga ugu weyn waa: RongShiDa, ZhiGao, Angel, Midea, iwm qiimaha aasaasiga ah ee shirkaddu waa "Diirada saar tayada halkii laga heli lahaa tiro, waxsoosaar qalbi leh". Waxaan rajeyneynaa inaan kuguuleysano adeeg qanacsan adoo u maraya shaqadeena adag. Waad wici kartaa shirkadayada wakhti kasta Haddii aad wax dhibaato ah ka aragto inta lagu gudajiro isticmaalka alaabtayada. Waxaan la tacaali doonnaa dhammaan dhibaatooyinka ka dib iibka si aad u qanciso. Si laguu daayo inaad wax ku iibsato, Xuzhou Xinpaez wuxuu ballan qaadayaa waxyaabaha soo socda: tayo sare, qiimo hoose, gaarsiin deg deg ah, adeegga ugu fiican ee iibka kadib.
Xinpaez, waxaan ahaanay halbeeg lagu qiimeeyo daaweynta Shiinaha. Sanadihii la soo dhaafay, waxaan ka helnay khibrado badan domainkan. Waxaan ku tiirsan nahay koox khubaro takhasus leh oo la aqoonsan yahay. Wax kasta oo aad ubaahantahay, waxaan kuusoo bandhigi doonaa xalka ugu fiican ee helitaanka biyo saafi ah.
Waxaan kaliya bixinnaa alaab tayo sare leh. Ujeedkeenu waa inaan la kulanno baahida macaamiisheena. Waxaan haynaa qalab casri ah, tikniyoolajiyad xirfadeed, qaaciddo cilmiyaysan iyo maareynta tayada wax soo saar adag. Waxaan ku ogaan doonnaa baahiyahaaga waqtiga, oo waxaan u samayn doonnaa nooc kasta oo alaab ah sida ay baahidaadu tahay.
Khubarada aan magacawnay waxay leeyihiin aqoon iyo khibrad faahfaahsan oo ku saabsan ka shaqaynta ururada ka shaqeeya soo saarista biyaha. Sababtoo ah shaqada guuleysatay ee xirfadlaasheena, waxaan awoodnay inaan iska taagno tartamayaashayada. Intaa waxaa sii dheer Waxaan nahay Bixiye Dahab ah oo PLUS ah oo ay caddeysay shirkadda SGS. Miirayaashayada biyaha iyo gulufyada dhammaantood waxay heleen ROHS, REACH iyo shahaadooyin kale.